Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी : टिचिङ अस्पतालमा खोइ सुरक्षा मापदण्ड ? [तस्बिरहरु]
कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी : टिचिङ अस्पतालमा खोइ सुरक्षा मापदण्ड ? [तस्बिरहरु]
काठमाडौं । साउन महिना सुरुआतसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको छ । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्‍न जिल्लामा संक्रणम तीव्र बनेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ भेरियन्ट थपिएसँगै तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयको यो भनाइले बल्ल सामान्य काममा फर्कन लागेका नागरिकमा फेरि पनि बन्दाबन्दी (निषेधाज्ञा) हुने हो कि भन्ने चिन्तामा थपिएको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुन सरकारले बिस्तारै एक पछि अर्को क्षेत्र खुल्ला गर्नु र नागरिक आफै पनि बाध्यताले आफ्नो काममा निस्कन थालेसँगै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाउँदा संक्रमितको संख्या बढेको बताउनुहुन्छ । विज्ञहरुले नागरिक सचेत नभए कोरोनाको फेरि भयावह स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, सार्वजनिक यातायात, कार्यालय, सार्वजनिकस्थल र अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा हेलचेक्र्याइँ बढ्दै गएको छ । अस्पतालमा जानेहरुले केहीले माक्स पनि नलाएका र लाए पनि सुरक्षित नलाएको देखिएयो भने लाइन बस्दा सामाजिक दुरीको मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । ग्लोबल मिडियाले काठमाडौं महाराजगन्जमा रहेको टिचिङ हस्पिटल (शिक्षण अस्पताल)को ताजा दृश्य यहाँ प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १५, २०७८, ०८:४१:००